आज २०७७ मिति माघ २१ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्
[ May 29, 2022 ] मुस्ताङको घासामा ठूलो आवाजसहित आ गो बलेको देखियो समाचार
[ May 29, 2022 ] पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन समाचार
[ May 29, 2022 ] ३० बर्षको उमेरमा बच्चा जस्तै व्यवहार, के भयो यस्तो ? कठै सबैलाई रु”हाउने हेर्नु`स् भिडियो समाचार
[ May 29, 2022 ] कस्तो थिए यस्तो भए! मलाई बचाउनुस्, म बाच्न चाहान्छु (हेर्नुस् भिडियो) समाचार
[ May 28, 2022 ] हेलिकप्टर बाट बीउ छर्ने उम्मेदवार`लाई जम्मा दुई मत समाचार
Homeसमाचारआज २०७७ मिति माघ २१ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्
February 3, 2021 admin समाचार 6176
पारीरीवारिक झोर झ’मेलाको सामना गर्नु पर्नेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सम्भा’बना रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य यात्रा का’रक समय रहेकोछ । शारीरिक आलस्यताले सतायनाले कार्यक्षेत्रमा ढि’लाइको सामना गर्नु पर्नेछ ।
आ’म्दानिका प्रशस्त श्रोतहरु फेला पर्नेछन । बौधिक सभा सम्मेलन जन्य कार्यमा सहभा’गीताको योग बन्नेछ । ब्यापार ब्यवसा’यमा भने समय मध्यम रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा लगाई”एको मेहेन’तको उचित कदर प्राप्त हुनेछ । आफुभन्दा सानाको स्वास्थमा सा’मान्य समस्या’ देखा पर्नसक्नेछ ।
मि’थुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)
स्वास्थमा सामान्य स’मस्या देखा पर्नेछ । परीवारजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्प’न्नहुन सक्नेछ । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहनेछ । गरीरहेको कार्यका क्षेत्रमा मान्यज’नहरुको मार्गदर्शन अबलम्वन नर्गनाले सा’मान्य तना’बमा फसिएला ।
बल तथा प’राक्रममा बृद्धिहुनेछ । नयाँ मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा मन प्रशन्न रहनेछ । मनोर’ञ्जनपुर्ण यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँकार्यको थालनि निकै उत्पा’दन मुलक साबित रहनेछ । अधुराकार्यहरु सन्चालन गर्न समय उत्तम रहेकोछ । पठनपाठनमा लगाई’एको समय राम्रो रहनेछ ।
अरुको प्रश’न्नताका निम्ती सामा’न्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । आफन्तजनहरु सगँ सामान्य वादवि’वादका कारण मनमुटाब हुन सक्नेछ । खान’पानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुप्रति गरीएको पुर्ण बिश्वा’समा धोका हुनाले मनमा सामान्य खिन्नता बोधहुन सक्नेछ ।
पा’रीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य क्षेत्रमा बिशेष फाईदा हुनेछ । अध्यन अध्यापनमा सम’य उत्तम रहनेछ । सामान्य कार्यमा अधिक समय ब्यतित हुनसक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । जिबन साथीको सह’योगमा गरीएका कार्यह’रुमा सफलता हात लाग्नेछन ।
अरुको छीटो बि’श्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । यात्र ामा साबधा’नि अपनाउनु पर्नेछ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसि’क चिन्ता’ले सताउन सक्छ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । गरीरहेको कार्य क्षेत्र समेत परीर्वतनको सम्भाब’ना रहेकोछ ।
मित्रजनहरुको साथ सहयो’गमा नयाँ कार्यको थालनि हुने योग रहेकोछ । पठन’पाठनका क्षेत्रमा खर्चिएको समय निकै उत्तम साबित रहनेछ । कला कौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा आ’म्दानि तथा मनो’रञ्जन दुबै प्रशस्त प्राप्त हुनेछन । ब्यपार ब्यव’सायमा नयाँ लगानि समेत उत्तम रहनेछ ।
मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सा’मान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अघिसरी कार्यप्रारम्भ नगर्नुनै उत्तम रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा बिभिन्न कारणबश ढिलाईको सामना गर्नु पर्नेछ । भौतिक साध’नको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपना’उनु पर्ने समय रहेकोछ ।
नेत्रृत्वदायी भु’मिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । अरुप्रति गरीएको पुर्ण बिश्वासमा धोका हुनाले मनमा सा’मान्य खिन्नता बोधहुन सक्नेछ । मनोरञ्जनपुर्ण यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहनेछ । आफन्तज’नहरुसगँ सामान्य वादविवादको सम्भा’बना रहेकोछ ।
सामान्य चोटप’टकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । गरीरहेको कार्य क्षेत्र समेत परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेस’मय रहेकोछ । अरुप्रति गरीएको बिश्वासमा धोकाहुन सक्नेछ ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि)
पारीवारिक साथसहयोग द्वारा ब्यापार ब्यव’सायमा मनग्य लाभ उठाउन सकिनेछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनसिलताको कदर हुने योग रहेकोछ । साजे’दारीकार्यका मार्फत उत्तम आम्दानी प्राप्तगर्न सकिनेछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभा’गीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ ।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठ जस्तै देखिने प्रकाश चन्दले गरे करुणासंग विबाह अभिनित भिडियो सहित
छ वर्ष पछि म’रेको मान्छेको चिहा’न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए – हे’र्नुहोस् भिडियो
८ बर्षको उमेरमा बिहे गरेर महिना दिन नबित्दै श्रीमानको मृ’त्यु, बिहेपछी झण्डै ८० वर्ष एक्लै जिबन बिताएकी वसुन्धरा
June 14, 2021 admin समाचार 4498
सरकारले दिने सामा’जिक सुरक्षा भत्ताको भरमा वसुन्धरा शर्माको चुल्हो बल्छ । प’रिवारमा अरू कोही छैनन् । खेती गरेर खाने जमीन छैन, उमेरले पनि डाँडा काटेकाले काम गरेर खान’सक्ने कुरै भएन । बिहे गरेको महिना नबित्दै
नेपाल दक्षिण एसियाकै, सबैभन्दा खुसी देश
March 20, 2021 admin समाचार 4865
कोरोनाभाइरस महा’मारीले मानिसहरुको कामकाज, दैनिकी, व्यवसाय, रोजगारी, शिक्षा लगायतमा गम्भी’र नकारा’त्मक प्रभाव पारे पनि त्यसले नेपालीहरुलाई खुसी हुनबाट भने रो’क्न सकेन । त्यसैले पछिल्लो १ वर्षमा नेपालीहरु अघिल्लो वर्षभन्दा झन् बढी खुसी रहेको पाइयो ।
बाघ सँग ३ मिनेटसम्म ल’डेर बाँ चेकी साहसी महिला (हेर्नुहोस भिडियो)
April 1, 2022 admin समाचार 989
मानिस बा””घ भन्ने बित्ति””कै डरा”” उने गर्दछन्। बा””घको छेउ””छाउ पर्न त के त्यसको आवा’ज साथै छाया समेत पर्न सकिदैन। के तपाईं पत्या’उनु हुन्छ बा””घ लाईनै जित्”ने साह””सी महिला पनि छिन्?? हो यस्तै घट ना घ’टेको
मुस्ताङको घासामा ठूलो आवाजसहित आ गो बलेको देखियो
पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन
३० बर्षको उमेरमा बच्चा जस्तै व्यवहार, के भयो यस्तो ? कठै सबैलाई रु”हाउने हेर्नु`स् भिडियो
कस्तो थिए यस्तो भए! मलाई बचाउनुस्, म बाच्न चाहान्छु (हेर्नुस् भिडियो)
हेलिकप्टर बाट बीउ छर्ने उम्मेदवार`लाई जम्मा दुई मत
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242112)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (230002)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229635)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228485)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (228012)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227451)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226796)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226379)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196991)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194394)